Zibhimba kakhulu kunokuba zilunge izinto kwiChiefs - Impempe
Zibhimba kakhulu kunokuba zilunge izinto kwiChiefs
Kungenzeka aphoqeleke ukudlala ngaphandle kwabadlali abane abamqoka uGavin Hunt uma iKaizer Chiefs seyibhekene nePetro De Luanda emdlalweni weCAF Champions League eFNB Stadium ngoMgqibelo ntambama.
Unozinti u-Itumeleng Khune unikwe ikhefu kulandela ikuvela kwesifo ekhaya kubo njengoba eshonelwe ngudadewabo kuleli viki. Ukaputeni uRamahlwe Mphahlele yena umisiwe njengoba athola ikhadi elibomvu bebhekene neWydad Athletic ngeSonto.
Akugcini lapho njengoba nabagadli oSamir Nurkovic noLeonardo Castro kungenzeka kushaye isikhathi somdlalo bengakulungele ukudlala.
UNurkovic wathinteka bedlala neWydad kanti uCastro kungenzeka aphunyuzwe ngenxa yokukhathala ngenxa yokulandelana eduze kwemidlalo.
“Nginomgadli oyedwa owumqemane (uLazarous Kambole). Kodwa leyo yinto ebengiyazi kusukela iviki liqala ngakho siqale ukuzilolongela lo mdlalo sikwazi lokho,” kusho uHunt ngoLwesihlanu.
Amakhosi akuwahambeli kahle nakulomqhudelwano njengoba esanephuzu elilodwa futhi esendaweni yesithathu eqoqweni layo. Nokho uHunt akakalilahli ithemba ngokuthi basangadlula kulesi sigaba.
“Uma ubheka umlando walo mqhudelwano, amaphuzu ayishumi ayaye abe nganele ukukudlulisela phambili. Sisasele nemidlalo emine. Okumele sikwenze wukuwina imidlalo yasekhaya bese sibona ukuthi awekho yini amaphuzu esingawathola ekuhambeni,” kuchaza uHunt.
Izinto azimvuni neze lo mqeqeshi ofike kuMakhosi wamukelwa ngenhlokomo, kodwa yena akumkhathazi lokho njengoba egxile emsebenzini wakhe wokuphucula isimo eNaturena.
“Umsebenzi womqeqeshi ukalwa ngemiphumela, izimo nokunye akubhekwa. Akusho lutho konke okunye. Njengamanje okumele sigxile kukho ukuphucula indlela esidlala ngayo bese sithola imiphumela emihle,” kusho yena.
Ngemuva kokubhekana neLuanda, Amakhosi azolibangisa e-Angola ngoMashi 16 emlenzini wesibili, bese eba sekhaya edlala neWydad ngo-Ephreli 9 bese aphethe imidlalo yeqoqo le eSudan kwiHoroya AC ngo-Ephreli 9.
Previous Previous post: Kumthusile ukunikwa isikhundla kumaProteas uBavuma
Next Next post: Usesophe ukuwaqhulula kwiBafana amagoli oweSwallows